पूजा र आकाशको ‘सम्झना बिर्सना’ निर्धारित मितिमा प्रदर्शन गर्न किन डरायो ? – darpannepal
पूजा र आकाशको ‘सम्झना बिर्सना’ निर्धारित मितिमा प्रदर्शन गर्न किन डरायो ?
काठमाडौं २९ वैशाख :
एक समयका हिट जोडी अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री पूजा शर्मा स्टारर फिल्म ‘सम्झना बिर्सना’को रिलिज पोस्टपोन्ड भएको छ । फिल्मको विभिन्न समस्या देखाउदै निर्माणपक्षले प्रदर्शनको एकसाता बाँकी रहँदा रिलिज रोकेको हो । यो फिल्म आगामी जेठ ६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो ।
फिल्मका कलाकारले नै प्रचारप्रसारमा असहयोग गरेको आरोप लगाउदै आएका निर्माण टिमले भोली हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले फिल्मलाई प्रभाव पार्ने भन्दै पूर्वनिर्धारित मितिमा फिल्म प्रदर्शन नगर्ने बताएको हो । निर्देशक निमेष प्रधानले निर्देशन गरेको फिल्ममा दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको जीवन पद्दतिको प्रेमकथामा आधारित भएर निर्माण भएको हो ।
यस फिल्मलाई आदित्य प्रधान र रेविका प्रधानले निर्माण गरेका हुन् । फिल्मको कथा तथा पटकथा निर्देशक प्रधान स्वयंले लेखेका हुन् । पूजा र आकाशका अलावा सुनिल थापा, शिशिर राणा, छुल्ठिम गुरुङलगायतको पनि अभिनय रहेको यो फिल्म आदित्य फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको हो ।